Dowlada Countiga Nairobi oo kuguuldareysatay in ay dumiso dhismooyin la doonayay in la bur burburiyo – The Voice of Northeastern Kenya
Dowlada Countiga Nairobi oo kuguuldareysatay in ay dumiso dhismooyin la doonayay in la bur burburiyo
Dowlada Countiga Nairobi ayaa kuguul dareysatay in ay bur buriyaan dhismooyin horay loo calaamadeeyay in dhulka lala simo kuwaas oo la sheegay in aan lagaarsiinin heerka dhismayaasha islamarkaana hadda laga cabsi qabay in ay dumaan.
Guryahaasi oo maanta oo khamiis ah la qorsheeyay in dib loo bilabo dumistooda ayaa markale hakad galay sababo la xiriira amaanka shaqaalaha oo aan la adekeynin iyadoo laga qabsi qabo in kooxda la mamnuucay ee Mungiki weeraro gestaan shaqaalahaasi.
Qorshahan lagu duminyo guryaha ayaa la doonayay in dib lo bilaabo maanta oo khamiis eheyd kadib markii dhisma shan dabaq ka kooban maalin ka hor uu kudumay xaafada Konfurta Kariobangi ee Magaalada tan Nairobi.
Madaxa fulinta qorsheynta magaalooyinka ee Countiga Nairobi Christopher Khaemba ayaa sheegay in shaqaalaha howshaasi guda gali lahaa aan lasiinin ciidamo amaankooda suga maadama meelaha laga duminayo guryaha ay kubadan yihiin kooxda Mungiki.
Mr Khaemba ayaa sheegay in mashiino ay ka heleen laanta adeega qaran ee dhalinyarada ee NYS-ta si howshooda ay uguda galaan balse waxaa uu intaa kudaray in wali taliyaha guud ee ciidamada booliska uusan ciidamo u soo dirin goobaha lagu duminayo guryaha.
Waxaa calaamada X oo ah kuwa la dumin rabo saran guryo lagu qiyasay 384 kuwaas oo la sheegay surtagalnimada ah in ay dumaan.
Tilaabadani ayaa kadambeysay kadib markii Bishii June guri lix dabaq ka kooban uu kudumay xaafada Huruma tas oo uu ka dhashay dhimasho dad tiradooda kor u dhaafeysa 50 qof.
← Laba haween ah oo isbitaalada la dhigay kadib markii seygooda dhaawacyo u gesteen
Madaxweynaha dalka oo kulan la yeeshay hogaamiyayaasha Gobolka Xeebta iyo Countiga Kisii →